Mpanao asa tanana : Nanomboka ny fanisana -
AccueilVaovao SamihafaMpanao asa tanana : Nanomboka ny fanisana
Mpanao asa tanana : Nanomboka ny fanisana
06/12/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Notsoahina avy amin’ny fandraisan’anjaran’i Madagasikara tamin’ny hetsika iraisam-pirenena ho an’ny asa tanana tany Ouagadougou na ny SIAO. Nanomboka omaly tetsy amin’ny tsenan’ny asa tanana tetsy Andravoahangy ny fanisana ireo mpanao asa tanàna malagasy. Araka ny vinavina dia manodidina ny 2 tapitrisa ny isan’ny mpanao asa tanana manerana an’i Madagasikara, nefa mbola tsy tena mitombina izany. Ho an’ny tsenan’ny asa tanana etsy Andravoahangy, dia manodidina ny 412 ireo mpikambana mivondrona ao anatin’ny Fivondronan’ny Mpiasa Mpivarotra Taozavatra Malagasy, na ny FIMPITAMA. Tafiditra amin’ny paikady entina hampiroboroboana ny asa tanana eto Madagasikara io fanisana io, satria anisan’ireo mbola mampihemotra ireo mpamatsy vola ny tsy fisian’ny antontan’isa mazava eo amin’ny asa tanana malagasy.
Tanjona amin’izao hetsika izao ihany koa no hametrahana ny asa tanana malagasy, mba hitondra ny anjara birikiny eo amin’ny fampivoarana ny toe-karena malagasy, ka ao anatin’izany ny anjara biriky amin’ny fampakarana ny harinkarena faobe, ny famoronan’asa ary ny fampivoarana ny asa tanana.
Ny tsy fahampian’ny antontan’isa sy ny angom-baovao momba ny asa tanana ihany koa dia manome vahana ireo asa tsy manara-dalàna sy mitarika amin’ny fisian’ny varo-maizina. Anisan’ireo olana sedrain’ny mpanao asa tanana ny tsy fahampian’ireo akora fototra ampiasain’izy ireo. Maro amin’ireo akora rahateo no voakasiky ny tontolo iainana noho ireo akora ireo azo avy amin’ny zava-maniry, na biby arovana sy efa ho lany tamingana. Miainga amin’ny fahafantarana ny isa sy ny angom-baovao samihafa no ahafahana mamaritra ny hametrahana ny asa tanana ho isan’ireo fototry ny toe-karena nefa miaro ny tontolo iainana, ary mampandray andraikitra ireo mpanao asa tanana.
Tsy hita popoka ny Fanjakana amin’ny fanomanan-tenan’ny Barea de Madagascar. Tsy nitazam-potsiny ny fahorian’ny ekipam-pirenena, noho izany, ny kandidà Marc Ravalomanana fa nitondra fanampiana 10 Tapitrisa Ar ho azy ireo. Araka ny efa fantatra, mianto-tena ...Tohiny